Sidee Hawlgallada Emailku Isbarbar dhigaan Ka Qaybgalka Bulshada | Martech Zone
Sidee Hawlgallada Emailku Isbarbar dhigaan Ka Qaybgalka Bulshada
Axad, Juun 14, 2015 Sabtida, Juun 13, 2015 Douglas Karr
Isla marka aan arko oo ay kasoo horjeeddo loo adeegsaday cinwaanka maqaal ku saabsan suuqgeynta, waxaan helayaa xoogaa howlgalin ah. Tani infographic hoose oo ka socda Devesh Design waxay qabataa shaqo weyn oo ah aragtida baahida loo qabo macaamiisha inay u adeegsadaan emaylka shirkadooda. Shaki iigama jiro sida awooda emaylka waana awood ahaan a riix suuq geyn tikniyoolajiyad si loogu dhiirrigaliyo macaamiisha inay tallaabo qaadaan. Way shaqeysaa… qof walbana waa inuu sameeyaa.
Si kastaba ha noqotee, isbarbardhigga emaylka iyo arrimaha bulshada ayaa ah tufaax khudradeed. Warbaahinta bulshada ayaa leh faa iidooyin aad u tiro badan oo aan ka aheyn gujinta xayeysiinta iyo beddelida. Warbaahinta bulshada ayaa aad looga cabsado helitaanka fariintaada. Markaa aan u adeegsanno tusaalaha shaxanka hoose. Waxaad u dirtaa emayl ilaa 1,000 ka mid ah macaamiishaada waxayna keeneysaa in 202 qof ay furaan emaylkaas 33 ka mid ahna ay gujinayaan.
Hadda aan wadaagno qoraalkaas baraha bulshada halkaasoo aad ku leedahay 1,000 qof oo raacsan labada Twitter iyo Facebook. Sida ku cad jaantuska, waxaa laga yaabaa in 10 qof ay dhab ahaan arkeen oo 3 guji. Taasi waxay u egtahay wax cabsi leh miyaanay ahayn?
Maya, maahan wax laga naxo. Waa tan sababta. Waxyaabaha aad ku dallacisay adoo adeegsanaya arrimaha bulshada waxaa wadaagay in yar oo ka mid ah dadkaas. Dadkaas tirada yar waxay leeyihiin in kabadan 20,000 oo taageerayaal ah. Kuwa raacsanna waxay gaarayaan in ka badan 100,000 oo raacsan. Kuwa raacana waxay gaarayaan malaayiin. Cidina ma furin emaylkaaga wax ka badan hal jeer waana dhif iyo naadir in qofba dhab u diro e-maylka saaxiibkiis. Laakiin mawjadaha waxqabadka bulshada ayaa sii socday bilo.
Waxaan leenahay qoraallo Martech Zone taas oo wali heleysa kumanaan aragtiyo iyo boqolaal guji sanado kadib markii aan qornay iyaga oo mahadsan baraha bulshada. Ma aha in aan xuso in saamiyadaas bulshada ay keeneen in dad kale ay qoraan maqaallo oo ay na tixraacaan, taas oo horseeday in la kordhiyo qiimeynta mashiinnada raadinta, taas oo horseeday taraafikada raadinta dabiiciga ah ee sare, taas oo horseeday in lagu qasbo oo la beddelo.
Waa infographic weyn oo taageeraya awoodda cajiibka ah ee emaylka. Laakiin dhimista warbaahinta bulshada waa khalad aad u weyn urur kasta. Xitaa kamahadleyno saameynta ka baxsan guji iyo beddelaad. Bulshadu waxay siisaa fursad ay ku dhisaan maamulka indhaha dadweynaha, si loo gaadho xayeysiis cajaa'ib leh iyada oo loo marayo ficillo waaweyn oo adeegga macaamiisha ah, iyo fayras dhab ah oo dhab ah oo emayl gebi ahaanba tegaya doonta.
Tags: Naqshadeynta Deveshhawlgelinta emaylkaemaylka iyo bulshadahawlgelinta bulshadaoo ay kasoo horjeeddo
Bitrix24: Middi Ciidan Iswiisaris ah oo Wada Shaqeyn
Sidee Ganacsigaagu uga Faa'iidaystaa Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada